🥇 ▷ OnePlus TV wuxuu isku dari doonaa 8 ku hadla iyo taageero loogu talagalay Dolby Atmos ✅
Hal-goys waxay gebi ahaanba geli doontaa warshadaha telefishanka ka dib markay ku guuleystaan ​​duubista telefoonnada gacanta. Shirkadda waxay qorsheyneysaa inay ku dhawaaqdo barnaamijkeeda dhamaadka ee Smart TV bishaan.Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah tilmaamayaasheeda ayaa soo daatay usbuucyadii la soo dhaafay. Waxa ugu dambeeyay ayaa ka socda Amazon India, taas oo shaaca ka qaaday waxqabadka marka la eego codka.
Marka loo eego muuqaal ay daabacday shirkadda weyn ee elektaroonigga ah, OnePlus TV waxay isku dari doontaa 8 ku hadla oo si wada jir ah u bixin doona 50 watts oo awood ah. Intaa waxaa sii dheer, waad yeelan doontaa taageerada Dolby Atmos, hareeraha teknolojiyada dhawaqa. Haddii macluumaadku sax yahay, sheyga ayaa si dhakhso leh isagu iska dhigaya mid ka mid ah telefishanka tixraaca tayada codka.
Ka sokow hal-abuurka golaha, waxaa jira telefishanno aad u yar oo u iftiimiya codkooda; badiyaa kama badna 20 watts oo awood ah. Haddii iibsaduhu doonayo inuu hagaajiyo qaybtan, waxaa lagama maarmaan ah in loo adeegsado nidaamyada ku hadla dibedda, oo matalaya kharash dheeraad ah. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in OnePlus ujeedadiisu tahay inay ka duwanaato soosaarayaasha kale iyagoo bixinaya “bass awood leh”, laakiin adigoon guriga daaqada ka tuurin.
Iyo sida ay sheegayaan wararkii u dambeeyay, OnePlus TV waxaa lagu heli karaa qiimo aad u soo jiidasho leh. Ujeeddadeeda ayaa ah in si dhakhso leh loo helo qayb ka mid ah suuqa, oo ay iska leeyihiin shirkado ay ka mid yihiin Sony, Samsung iyo LG, oo magacyo dhowr ah. Iyada oo bilawgeeda bilowgeedu ay ku koobnaan doonto Hindiya, waxay runtii ku dhamaan doontaa inay gaadho dhulal kale bilaha.
OnePlus ayaa horey u xaqiijisay in telefishankeeda lagu bixin doono a cabirka ugu yaraan 55 inji, sidaa darteed kala duwanaansho waaween lama xukumi karo. Markay noqoto softiweer, wey is dhex gali doontaa Android TV. Toddobaadyada soo socda, dhammaan faahfaahinta rasmiga ah ayaa la shaacin doonaa, oo ay kujirto qiimaheeda qaaliga ah iyo qaabeynta.
Microsoft Surface Pro 7 iyo Surface Laptop 3 faahfaahinta kumbuyuutarka